Tilmaamaha Ilmo soo rididda ee Misoprostol iyo Mifepristone
Sida Loo Isticmalaa Kaniinka Ilma soo ridka
Waxaa jira laba nooc oo daawo ah oo loo isticmaalo soo rididda: mifepristone iyo misoprostol. Ilmo iska soo ridka ilmuhu kaniiniyada si fiican ayuu u shaqeeyaa haddii labadan daawo la wada qaato. Si kastaba ha noqotee, haddii mifepristone aan la heli karin, misoprostol oo keliya ayaa sidoo kale ka shaqeyn doonta joojinta uurka welina waa badbaado.
Xulo haddii aad jeceshahay inaad wax ka barato tilmaamaha ku saabsan soo rididda ilmo la’aanta leh ee ‘mifepristone’ iyo ‘misoprostol’ ama ‘misoprostol’ oo keliya.
Mifepristone iyo Misoprostol
Kahor intaadan bilaabin, aqri talooyinkayaga ku saabsan Kahor Isticmaalka Kiniinka. Hubso:
Uurkaagu wuxuu ku jiraa 13ka toddobaad ee ugu horreeya (91 maalmood)
Waxaad dib u eegis ku sameysay dhamaanteen tixgelinta iyo talo guud.
Waxaad leedahay a qorshaha amniga diyaar u ah xaalad dhif ah ee deg-degga ah.
Tilmaamaha Ilmo soo rididda ee Mifepristone iyo Misoprostol
Ilmo iska soo ridid ka mid ah mifepristone iyo misoprostol, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato hal 200mg oo kiniin ah mifepristone iyo afar ilaa siddeed 200mcg kaniin oo ah misoprostol. Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad haysatid xanuun baabi’iye xanuun, sida ibuprofen, si looga caawiyo maaraynta xanuunka. Acetaminophen iyo paracetamol uma shaqeeyaan xanuunka inta lagu jiro ilmo soo rididda sidaas darteed laguma talinayo.
Waa tan sida loo mifepristone iyo misoprostol loo qaado si loo joojiyo uurka:
Ku liq hal kiniin ah 200mg oo ah ‘mifepristone’ biyo.
Sug 24-48 saacadood.
Dhig 4 kiniin oo misoprostol ah (200 mcg midkiiba) carrabka hoostiisa oo halkaa ku hay 30 daqiiqo markay kala baxayaan. Waa inaadan hadlin ama wax cunin 30-kan daqiiqadood, marka way fiicantahay inaad meel uun xasilloonid oo aan lagugu qasin. 30 daqiiqo kadib, waxoogaa biyo ah cab oo liqo wax kasta oo ka haray kaniiniyada. Tani sidoo kale waa wakhti fiican oo la qaato xanuun baabi’iye sida ibuprofen, maadaama casiraadku dhaqso u bilaaban doonto.
Waa inaad kubilaabataa dhiig baxa iyo casiraadda 3 saacadood gudahood markaad isticmaasho 4 kaniini ee misoprostol.
24 saacadood ka dib qaadashada 4 kaniini ee misoprostol, haddii aadan dhiig billaabin, ama haddii aadan hubin in ilmo soo rididdu shaqaysay, carrabkaaga hoos dhig 4 kaniini oo kale oo ah misoprostol. Halkaas ku hay 30 daqiiqo markay kala baxayaan. 30 daqiiqo kadib, waxoogaa biyo ah cab oo liqo wax kasta oo ka haray kaniiniyada.
Tixgelinnada Kale ee Ilmo Soo rididda Mifepristone iyo Misoprostol:
Baro waxa lafilayo kadib qaadashada mifepristone iyo misoprostol halkan.
Haddii aad la kulanto casiraad xun, ibuprofen waa daawo wanaagsan oo lagula tacaalo xanuunka. Waxaad ka iibsan kartaa ibuprofen 200 mg xoog miisaanka (warqad dhakhtar la’aan) inta badan wadamada. Qaado kiniinno 3-4 ah (200 mg midkiiba) 6-8 saacadood kasta. Haddii aad u baahan tahay wax dheeraad ah oo ka mid ah xanuun joojinta, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa 2 kaniini oo ah Tylenol (325 mg) 6-8 saacadood kasta.
Haddii aad ka walaacsan tahay habka soo rididda ilmaha oo aad u baahan tahay taageero dheeri ah, waxaad kala xiriiri kartaa saaxiibbadayada www.safe2choose.org, www.womenhelp.org ama www.womenonweb.org.
Haddii aad isticmaashay kaniiniyada ilmo iska soo ridka mifepristone iyo misoprostol, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad booqato bixiye daryeel caafimaad booqasho dabagal ah. Daawooyinkani waa kuwo wax ku ool ah sidaa darteed Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa kugula taliyay inaad u baahan tahay inaad dabagal ku sameyso kaliya haddii:
Waxaad dareemeysaa jirro, ama xanuunkaagu ma soo fiicnaanayo 2 ama 3 maalmood kadib. Haddii tani dhacdo, raadso daryeel caafimaad isla markaaba.
Weli waxaad dareemaysaa astaamaha uurka laba toddobaad ka dib qaadashada kiniinka ilmo iska soo rididda.
Dhiigbaxaagu waa culus yahay oo ma khafiifayo ka dib 2 toddobaad.
Tilmaamaha Ilmo Soo rididda ee Misoprostol Kaliya
Haddii mifepristone aan laga heli karin goobtaada, waxaad isticmaali kartaa misoprostol kaligaa si aad u joojiso uurka.
Ilmo soo rididda oo keliya misoprostol, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato laba iyo toban 200mcg kaniin oo ah misoprostol. Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad haysatid xanuun baabi’iye xanuun, sida ibuprofen, si looga caawiyo maaraynta xanuunka. Acetaminophen iyo paracetamol uma shaqeeyaan si ay u maareeyaan xanuunka inta lagu jiro ilmo soo rididda sidaas darteed laguma talinayo.
Waa tan sida loo isticmaalo ‘misoprostol’ kaligaa si loo joojiyo uurka:
Sug 3 saacadood.
Dhig 4 xabbo oo kale oo misoprostol ah (200mcg) carrabkaaga hoostiisa halkaasna ku hay 30 daqiiqo illaa ay ka milmaan
Sug 3 saacadood oo kale.
Dhig 4 kaniin oo kale ah misoprostol (200mcg) carrabkaaga hoostiisa halkaasna ku hay 30 daqiiqo illaa ay ka milmaan.
Waa inaad bilowdid dhiig bax iyo casiraad muruqyo markaad qaadanayso kaniiniyada. Hubso inaad wada qaadato dhammaan 12 kaniin xitaa haddii aad dhiig baxdo kahor intaadan wada qaadin dhammaantood.
Tixgelinnada Kale ee Ilmo Soo rididda Misoprostol:
Baro waxa laga filan karo ka dib qaadashada misoprostol halkan.
Haddii aad isticmaashay misoprostol, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad booqato bixiye daryeel caafimaad booqasho booqasho dabagal ah. Daawooyinkani waa kuwo wax ku ool ah sidaa darteed Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa kugula taliyay inaad u baahan tahay inaad dabagal ku sameyso kaliya haddii:
Dhammaan waxyaabaha ku jira websaydhkan waxaa qoray kooxda HowToUseAbortionPill.org iyadoo la waafajinayo heerarka iyo borotokoolka The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International and carafem.
The National Abortion Federation (NAF) waa ururka xirfadleyda ah ee bixiyeyaasha ilmo iska soo ridka ee Waqooyiga Ameerika, iyo hoggaamiyaha udooda ilma iskasoo ridida sharciaga ah. Mawduucyada ku saabsan HowToUseAbortionPill.org waxay la jaan qaadayaan Tilmaamaha Siyaasadda Caafimaadka 2020 ee ay soo siidaysay NAF.
Ipas waa hay’adda kaliya ee caalamiga ah oo si kali ah diirada saara balaarinta marin u helka ilmo iska soo ridka iyo daryeelka ka hortagga uurka. Mawduuca ku saabsan HowToUseAbortionPill.org wuxuu la jaan qaadayaa Akhbaaraadka Caafimaadka Taranka ee 2019 oo ay soo saartay Ipas.
The World Health Organization (WHO) waa hay’ad gaar ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay oo u qaabilsan caafimaadka bulshada caalamiga ah. Waxyaabaha ku jira HowToUseAbortionPill.org waxay la jaanqaadayaan ilma iskasoo rididda nabdoon ee 2012: hagitaan farsamo iyo siyaasad nidaamyo caafimaad oo ay sii deysay WHO.
DKT International waa urur diiwaangashan, oo aan faa’iido doon ahayn oo la aasaasay 1989 si diirada loogu saaro awooda suuq geynta bulshada qaar ka mid ah wadamada ugu waaweyn oo leh baahiyaha ugu weyn ee qorsheynta qoyska, kahortaga HIV/AIDS iyo ilmo iskasoo ridid aamin ah.
carafem waa shabakad kiliinik ah oo bixisa daryeel ilmo soo ridid haboon oo xirfad leh iyo qorsheynta qoyska si dadku u xakameeyaan tirada iyo kala fogaanshaha carruurtooda.